Varotra rongony eny Anosizato Telo mianadahy voasambotra
Ny tompon’ny zava-mahadomelina tao Anosizato no nanome asa tovolahy iray mpitady asa mba hivarotra rongony teny Itaosy.
Ity farany izay nivarotra ny entana antsinjarany teny Avarabohitra Itaosy no tra-tehaka voalohany nahafahan’ny mpitandro filaminana nanambotra ny mpambongady rongony teny Tandrokomby Anosizato. Olona miisa telo izy ireo, noho izany ka lehilahy ny roa ary vehivavy ny iray, no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny STUP Anosy ny 13 jolay teo.
Ny 4 jolay mantsy nahazo angom-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny polisy miasa ao amin’ny STUP Anosy fa misy olona mivarotra rongony eny Anosizato. Nidina teny an-toerana avy hatrany izy ireo nijery ny zava-nisy. Lehilahy iray nivoaka avy any anelakela-trano nibaby sakaosy maintimainty no hitan’izy ireo teny an-toerana. Natao ny fanaraha-maso an’ity tovolahy ity nandritra ny andro maromaro, araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena. Ny 13 jolay 2019 dia nosamborina teny Ambodirano Avarabohitra ilay tovolahy. Nahitana rongony 1,8kg teny aminy nandritra ny fisamborana azy. Ilay lehilahy tratra indray avy eo no nahafahana nisambotra ireo olona roa teny Anosizato. Nandritra ny fisavana ny tranon’ireto farany dia nahitana rongony milanja 180kg tao amin’izy ireo. Fantatra ary fa amidin’ilay tovolahy 45 000Ar ny sase ary eny Itaosy no amarotany izany iray. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ataon’ny Polisin’ny STUP. Manodidina ny 25 hatramin’ny 46 ny salan-taonan’izy ireo.